Gazety afovoan-trano mivarotra ivelany miaraka amin'ny tranolain'i Sidewalls 3x6m sy trano maitso Green Winsom
Gazebo ivelany fivoahana ivelany miaraka amin'ny sidewalls 3x6m
20-49 Taratasy 50-99 Taratasy
> = Pieces 100
Ity lay tranona ity dia mety amin'ny hetsika ivelan'ny fianakaviana, amoron-dranomasina, fety mianakavy, tobim-pivoriana ary fampiasa ara-barotra.M Azonao atao koa ny mametraka azy eo an-tokotaninao ho toy ny masoandro mody mahafinaritra ary mahafinaritra ny mampihetsi-po ny ankohonanao sy ny vahininao.
1) Loko vy vita amin'ny vovony mainty, harafesina ary matevina.
1) lamba oxford avo lenta miaraka amina coating PVC ary fiarovana 100% ary fiarovana UV
2) Mora ny napetraka 2 olona manaraka ny manual manual
3) Ny fitahirizana sy ny fitaterana mora.
Laharana modely WS-F236
Anaran'ny entana Gazebo ivelany ivelany miaraka amin'ny Sidewalls 3x6m
Haben'ny vokatra 10x20ft (3x6m)
Fonony fitaovana 600D Oxford
Fitaovana amin'ny serivisy 600D Oxford
Spigrafaly. mombamomba ny tongotra-32x32 / 25x25mm, fantsom-pako-13x26mm, savony-0.8mm
MOQ 20 isa
Mety amin'ny karazana fiasa ivelany any ivelany, toy ny seho, fety, BBQ, fety, fampiasana varotra sy ny sisa.
Amboary ny kanopy eo ivelan'ny lakandrano ao anatin'ny dingana Ez. Ho an'ireo set-up manaraka dia afaka mijanona tsara amin'ny sefo canopy mandritra ny fakana ny lakandrano ary hiditra ao anaty kitapo fitahirizana. Aza manoro hevitra ny hanaisotra ny canopy mandritra ny fotoana fitahirizana lava kokoa hanitarana ny androm-piainan'ny canopy. Rehefa tonga ny fotoana hanamboarana azy, esory ny tsato-by vy sy ny tontonana rindrina, atsipazo ny fanitarana ny tongotra ary alaivo any anaty kitapo mihodinkodina tonga lafatra amin'ny fitehirizana ao anaty fiaranao, kamio, garazy, raikitra, na toerana mety hafa.
Mioritsoritra vy matevina vita amin'ny vy vita amin'ny vovoka vita amin'ny vovony miforitra.
Ny tongotra tsirairay miaraka amin'ny bokotra famotsorana haingana haingana dia mora ny mamoritra sy manitsy ny haavony (3 haavo avo azo).
Ny fonon-tafo dia vita amin'ny lamba vita amin'ny oxd 600D miaraka amin'ny coating PVC ary ny fiarovana ny rano 100% ary ny fiarovana UV.
Kitapo tavy henjana henjana 600D, mateza ary tsy mahazaka ranomaso. Ny fitahirizana sy ny fitaterana mora. Miaraka kitapo mety sy mivalona, ​​dia afaka mankafy ny fotoananao na ny fety amin'ny fotoana sy toerana rehetra.
Previous: Tranokala ivelan'ny hetsika 3x3m
Manaraka: Fambolena an-jaridaina plastika misy ny fambolena 3 x 2 Meter
Toby azo heverina
Tranolay fampisehoana momba ny varotra
Trano lay mitokana fivarotana avo lenta 10 ...
Tranon-tsolosa ho an'ny Premium 10x15ft (3 × 4.5m)
Fonenana an-tsokosoko ivelany 2x2m
Tranokala ivelan'ny hetsika 3x3m
Gazety ivelany ivelan'ny Gazebo 3x3m